Mini Lyrics Version 7.4.6.0 Full Loader...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Mini Lyrics Version 7.4.6.0 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဒီကောင်လေးကတော့ Update လေးပါ...! ကျွန်တော် အရင်လည်း တင်ပေးထားပါတယ်...!Update လေးတွေမှ သုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးထားပါတယ်...!ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်ကတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်...!Player အားလုံးနီးပါး Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်...!သူငယ်ချင်းတို့ သိပြီးသား ဖြစ်သောကြောင့် ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 1.85MB ရှိပါတယ်...!စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
Winamp. Windows Mediplayer.. Quintessential Player
VLC Player... Real Player... iTunes...
Musicmatch Jukebox.... Media Monkey... KM Player
Jet Audio.... Yahoo! Music Engine... J. River Media Center
J. River Media Jukebox... XM Play... Helium Music Manager
Album Player... BSPlayer.
No Response to "Mini Lyrics Version 7.4.6.0 Full Loader...!"